1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tne-UP Project eyisilinda Shona Isondlo | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Seahorse Tne-UP Project eyisilinda Shona Isondlo
Uma uzuza njengelinye lalezi zinjini ezindala zezikebhe futhi awunasiqiniseko ngomlando, kuwumqondo omuhle ukudonsa ikhanda lesilinda bese ubheka okungaphansi. Susa ama-spark plugs. Usebenzisa isikrufu esingu-7/16, susa amabhawodi ayishumi abambelele ekhanda lesilinda. Ngobunono khipha ikhanda lesilinda kukhredkini ukuze wephule uphawu lwekhanda gasket.
Kufanele esikhundleni gasket ikhanda ngentsha.
Shona Gasket Inombolo yengxenye ye-OMC 303438 NAPA / Sierra Ingxenye Inombolo 18-2885
Manje njengoba ikhanda lesilinda selicishiwe, sula, hlanza, futhi uhlole izindonga zesilinda, ama-piston nekhanda lesilinda. Futhi, hlola imigudu yamanzi ezungeze amasilinda. Usebenzisa ipayipi lomoya, shaya futhi uhlanze izindima zamanzi. Ngisebenzise ibhulashi elincane locingo ukuhlanza ikhabhoni kuma-piston nangaphakathi kwekhanda lesilinda. Ungakuthandi ukuhlanza le khabhoni. Uma uhlanza kakhulu futhi uye ezinsimbini ezingenalutho, ungakha "indawo eshisayo" ku-piston. Akudingeki ukuthi ukuthole ngokuphelele lokhu kuhlanzekile. Enye ikhabhoni ijwayelekile.
Esinye sezizathu eziyinhloko zokususa amakhanda esilinda ku-ch ukuze uqiniseke ukuthi ikhanda aliphikisiwe. Ngokuhamba kwesikhathi, ngokushisa nokupholisa, ikakhulukazi uma imoto ihlale ishisa, ikhanda lesilinda lingabhampa. Njengoba ngingenawo umshini wokugaya, ngimane ngibeke ishidi le-grit sandpaper elicolekileyo esiqeshini sengilazi noma okuthile okuyisicaba bese ngihambisa ikhanda lesilinda ngephethini eyindilinga kuze kube yilapho ubuso bokuhlangana buyisicaba. Ungabona lapho ubuso busicaba ngoba uzoba nensimbi ecwebezelayo engenalutho yonke indlela ezungeze ubuso bekhanda lesilinda.
Gcoba i-gasket lekhanda elisha ngamafutha ka-2 womjikelezo bese ubuyisela ikhanda lesilinda emuva kwi-motor block. Izimbobo ezisekhanda lesilinda azilingani ukuze ikhanda lingabuyeli emuva ngendlela engafanele. Ungadinga ukuzungezisa ikhanda ama-degree angama-180 uma amabhawodi engabonakali emgqeni. Qiniseka ukuthi ungapheli ukuqinisa amabhawodi. Wonke umuntu ubonakala ecabanga ukuthi amabhawodi ekhanda adinga ukuqina ngempela. Lokhu kuzomane kusonte ikhanda. Futhi, qinisa ikota kuphela ujike udlule. Uma uqinisa lawa mabhawodi, udinga ukugoqa phansi imishudo ebhekane ngokulingana kuze kube yilapho usuqedile konke bese ubuyela emuva uzungeze kuze kube yilapho sekuqiniswe konke ikota phenduka udlule. Ngale ndlela ikhanda lizoxhunyaniswa ngokulinganayo nebhulokhi.